सरकारले कहाँ कसलाई नियुक्त गर्‍यो ? - Birgunj Sanjalसरकारले कहाँ कसलाई नियुक्त गर्‍यो ? - Birgunj Sanjalसरकारले कहाँ कसलाई नियुक्त गर्‍यो ? - Birgunj Sanjal
सरकारले कहाँ कसलाई नियुक्त गर्‍यो ?
२६ आश्विन २०७७, सोमबार ०७:२२
वीरगंज | सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको अध्यक्षमा डा. वशिष्ठप्रसाद रिजाललाई मनोनीत गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आइतबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा डा. बाबुराजा अमात्य र राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा तालिम विकास समितिको अध्यक्षमा प्रा.डा. देवबहादुर रोका क्षेत्रीलाई मनोनीत गरेको बताए।
त्यस्तै सरकारले औषधि परामर्श परिषद्का सदस्यहरुमा प्राडा संगरत्न बज्राचार्य, बाबुराम हुमागाईं र दीपकप्रसाद दाहाललाई नियुक्त गरेको छ। उक्त बैठकले वायुसेवा निगमको महाप्रवन्धकमा डिमप्रकाश पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै लुम्बिनी विकास परिषदको सदस्य सचिवमा सानुराजा शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ। उनी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २१ का स्थायी बासिन्दा हुन्।
बारामा गोली चल्यो, एक घाइते
मंसिर ९ बाट कक्षा १२ को परीक्षा
नेप्से परिसूचक करिब १४ अंकले बढ्यो, चार उपसमूह ओरालो
सुन भन्दा पनि महंगो छ यो तरकारी, एक किलोकै १ लाख २८ हजार रुपैयाँ !
सपनामा खाना खाँदै गरेको देख्नुको मतलव के ?
पर्साका थप ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
द्वापर युगमा गरिएका भविष्यवाणी सत्य सावित हुँदै !
वीरगंजबाट पक्राउ परेका ८ जना लेखनदास रीहा
वीरगंजबाट मात्रै ३७ करोड मूल्य बराबरको मल बिक्री